नेपालले भारतीय नागरिकलाई ट्रान्जिट उडानमा रोक लागेपछि भारतले जारी गर्‍यो ट्राभल एडभाइजरी - Himali Patrika
नेपालले भारतीय नागरिकलाई ट्रान्जिट उडानमा रोक लागेपछि भारतले जारी गर्‍यो ट्राभल एडभाइजरी
हिमाली पत्रिका १४ बैशाख २०७८, 9:39 pm
१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा ट्रान्जिट भई तेस्रो मुलुकमा उड्न रोक लागेसँगै भारतले आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै सचेत गराएको छ । अध्यागमन विभागले १५ वैशाखबाट लागु हुने नेपालमा ट्रान्जिट भई तेस्रो मुलुकमा जान विदेशी नागरिकलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
अहिले भारतबाट उडानमा प्रतिबन्ध लागेका मुलुकमा नेपाल ट्रान्जिट भई भारतीय नागरिक विदेश जाने गरेका थिए । नेपाल सरकारले संक्रमण भित्रन सक्ने भन्दै नेपालमा पीसीआर परीक्षण रोक्ने देखि तेस्रो मुलुकमा उडान रोक्ने सम्मको निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले मंगलबार आफ्ना नागरिकलाई ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै नेपालको निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । दूतावासले तोकिएको मितिपछि नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जाने गरी नेपाल नआउन सचेत गराएको छ । साथै, यो अवधिमा नेपाल आइसकेका भारतीय नागरिकको सुरक्षित प्रस्तावको व्यवस्थापनका लागि भने दूतावासले नेपाली अधिकारीहरुसँग समन्वय गरिरहेको बताएको छ ।
औषधि र अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि एक साता धैर्य गर्न भारतको आग्रह
नेपालमा लिक्विड अक्सिजन निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन आग्रह गर्दै सरकारले शुक्रबार भारतलाई पत्राचार गरेको छ । भारतीय पक्षले भने एक साता धैर्य गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपालमा भारतको झारखण्डस्थित लिन्ड इन्डिया अक्सिजन प्लान्टबाट मासिक एक सय ५० टन अक्सिजन आपूर्ति हुँदै आएको थियो । शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिले आयात गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय आन्तरिक खपतलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको जानकारी भारतीय उद्योगले दिएको थियो । अहिले लिक्विड अक्सिजन र सिलिन्डर आउन रोकिएको छ ।
नेपालमा संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि हाल मौज्दात रहेको अक्सिजन र सिलिन्डरले नपुग्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतस्थित नेपाली दूतावासले अक्सिजनका लागि पहल गरिरहेका छन् । लिक्विड अक्सिजन, सिलिन्डर, रेमडिसिबिरलगायतका औषधिको आपूर्तिमा सहजीकरण गरिदिन सरकारले कूटनीतिक च्यानलमार्फत भारतलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि यसबारे भारतीय समकक्षी डा. हर्षवर्धनसँग कुराकानी गरेका छन् ।
‘हामीले लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर तथा अत्यावश्यक औषधिलगायतको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोटमार्फत शुक्रबार आग्रह गरेका छौँ । अहिले लिक्विड अक्सिजन र सिलिन्डरको आपूर्ति हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ,’ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हाम्रो आग्रहलाई भारत सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको पाएका छौँ । अक्सिजनको आपूर्ति चाँडै हुने वातावरण बन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’
स्रोतका अनुसार भारतले एक सातामा नेपालका लागि अक्सिजन र सिलिन्डर आपूर्तिका लागि कानुनी बाटो खोलिदिने आश्वासन दिएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारत सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरोना संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने रेमडिसिबिर औषधि बंगलादेशबाट पनि ल्याउने तयारी भएको छ । तर, अक्सिजनका लागि भारतबाहेकको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा भएको मौज्दातले तत्कालको आवश्यकता पूरा हुने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई दिएको छ ।
‘हामीले निर्यातको प्रतिबन्ध हटाउन भारतसँग आग्रह गरेका छौँ, त्यो हट्नासाथ निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने हो, सरकारले होइन,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने । दिल्लीबाट नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तरी डिभिजन प्रमुख अनुराग श्रीवास्तव, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाली अधिकारीले झारखण्डको जमसेदपुरस्थित लिन्ड इन्डिया नामको अक्सिजन फ्याक्ट्रीका पदाधिकारीसँग पनि यसबारे कुराकानी गरेका थिए । त्यहाँका डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेटलगायतका पदाधिकारीसँग पनि नेपाली दूतावासमार्फत छलफल भएको थियो । ‘नेपालमा अक्सिजन तथा सिलिन्डर पठाइदिन हामीलाई समस्या छैन, केन्द्र सरकारको निर्देशन आउनासाथ हामी आपूर्तिका लागि खुला गरिदिन्छौँ भन्ने जानकारी स्थानीय प्रशासनबाट आएको छ । हामी केन्द्र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
खोप आउन अझै केही समय लाग्ने
नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोपको भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, १० लाख डोज मात्रै आपूर्ति भएको छ । बाँकी १० लाख डोज खोप अझै दिएको छैन ।
नेपालले खोप आपूर्तिका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । अमेरिकाले खोप बनाउने प्रिकसर केमिकलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण खोप तयार हुन नसकेको जानकारी सेरम इन्स्टिच्युटका पदाधिकारीले नेपाली दूतावासलाई दिएका थिए । अहिले भने अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । केमिकल भारततर्फ प्रस्थान भइसकेका कारण चाँडै उत्पादन हुने र पहिलो चरणमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने आश्वासन सेरमले दिएको छ ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले भने, ‘तर, अमेरिकाबाट शनिबार मात्रै भारतका लागि प्रस्थान गरेको जानकारी आएको छ । त्यो आइसकेपछि उत्पादन हुन्छ र हामीलाई तत्कालै दिन्छौँ भन्ने पछिल्लो वचनबद्धता आएको छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलाइ भए पनि खोप आउँछ, हामी एकदमै विश्वस्त छौँ ।’
खोप आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरसँग २७ चैतमा टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । जानकार अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय समकक्षीसँगको टेलिफोन संवादमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले अन्य देशहरूबाट उपहारमा आएको खोप ग्रहण गरिरहेको, तर भारतीय कम्पनीबाट नेपालले खोप खरिद गर्न चाहेको बताएका थिए ।
नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न भारत सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने आश्वासन डा. जयशंकरले दिएका थिए । नेपाललाई भारत सरकारले १० लाख डोज खोप उपहारमा दिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाका लागि भारतीय सेनाले एक लाख डोज खोप छुट्टै दिएको थियो ।